USAHello အကြောင်း | ဒုက္ခသည်များအတွက်တစ်က်ဘ်ဆိုက်, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်အိုးအိမ်မဲ့လူတွေ | USAHello
မစ်ရှင်, Vision ၏, နှင့်တန်ဖိုးများ
USAHello USA တွင်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဖန်တီး website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
USAHello တစ်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါသည်, အရင်းမြစ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်အသစ်ရောက်ရှိလာသောရတာဟာပြည့်စုံက်ဘ်ဆိုက်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မိမိတို့မိသားစုများအတွက်အောင်မြင်သောအသက်တာကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ပြန်လည်နေရာချထားဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာအပေါ်ပူးပေါင်းခဲ့ကြ, အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူနှင့်ကြားဖြတ်ပညာရေးနှင့်အတူသူတို့အဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားသော. ကျွန်တော်တို့၏ အစီအစဉ်များ နောက်ထပ် automated နှင့်လက်စွဲဘာသာပြန်ချက်များကိုနေဖြင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဘက်စုံသင်ယူမှုနည်းစနစ်များတွင်နောက်ဆုံးပေါ်နေကြတယ်. ကျနော်တို့ကမိုဘိုင်းနည်းပညာ၏ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံများကိုအင်တာနက်ရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံး, ယုံကြည်စိတ်ချထောက်ခံမှုဘယ်မှာအခါကလိုအပျ.
USAHello USA တွင်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်သာပြည့်စုံအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. တိုင်းပြည်နယ်အတွက်အသစ်ရောက်ရှိလာသောကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှု, ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အနှံ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီများနှင့်အခြား Non-အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူမိတ်ဖက်များ. ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ပြီးသားသူတို့နှင့်အတူမလိုအပ်သောသူတို့အားသူတို့ကိုပိုပြီးနားလည်လွယ်ခြင်းနှင့်လက်လှမ်းအောင်နေဖြင့်တည်ရှိနေသည့်အထောက်အပံ့ On-The-မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ဖြည့် FindHello, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်း app ထဲမှာဖြန့်ချိ 2019 ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR နှင့်အတူ ပူးပေါင်း..
USAHello ကကူညီရန်ကြိုးစားနေသည်ရပ်ရွာနှင့်အတူရငျးနှီးအပြန်အလှန်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့အသစ်ရောက်ရှိလာသောမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အကောင်းဆုံးထောက်ခံသူများဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်. ပိုများသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ထက်ဝက်ကျော်ဒုက္ခသည်များပြန်လည်နေရာချထားသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြောင်း- နှင့်ဒုတိယမျိုးဆက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ. ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များကိုတီထွင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်မျက်နှာသစ်အသိုင်းအဝိုင်းဆီက input နှင့်အတူတိုးတက်နေကြသည်, USAHello ရဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်အကြံပေးကောင်စီအပါအဝင်.
USAHello ၏အစီအစဉ်များကိုအလွန်တရာထိရောက်သောကုန်ကျနေကြသည်. ကျနော်တို့အင်တာနက်၏တန်ခိုးနှင့်လက်လှမ်းမမီကိုသုံးပါ, လက်ကိုင်နည်းပညာ၏ပြန့်ပွားနဲ့ပေါင်းစပ်, အပြတ်အသတ်အရွယ်မှာဖြစ်ကြောင်းအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်. ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသန်းပေါင်းများစွာကိုကူညီသည်နှင့်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအားကောင်းလာစေရန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကို, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီမိုကရေစီ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု ItaliaHello, အတွက်ဖြန့်ချိ 2019 ဥရောပတိုက်တွင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အရင်းမြစ်များပေး.